(၂၄-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ – PVTV Myanmar
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ထုတ်ဝေသော နေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက CDM တွေကို ဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ Non CDM ဝန်ထမ်းအရာရှိ ၄၀ ဦးကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပြီး ရာထူးကထုတ်ပယ်
ကိုဘမောင် (CDM) ရေးသားပြီး မြနှင်းရည်လွင် ခံစားရွတ်ဆိုတဲ့ “မုန်တိုင်းထဲကအားမာန် သမိုင်းတွင်မယ့် CDM” ဆိုတဲ့ကဗျာကို ခံစားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Radio NUG – 21st Jan, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 21st, 2022 Morning
Radio NUG – 20th Jan, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 20th, 2022 Morning
Radio NUG – 19th Jan, 2022 Evening
Radio NUG – Jan 19th, 2022 Morning
Radio NUG – Jan 18th, 2022 Morning
Radio NUG – 17th Jan, 2022 Evening
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကုလသမဂ္ဂကိုပဲ အားကိုးလုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘဲ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အစိုးရလို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းပြော
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုအခြေအနေက အားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေလို့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းပြောကြား
(၁၅-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
(၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
– ဇန်နဝါရီ (၇)ရက်က စခဲ့တဲ့ (၄)ရက်တာ တိုက်ပွဲမှာ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ စစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်
PVTV Exclusive Interview
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူးအောင် နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုကိစ္စ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ဒီတစ်ပတ် မိသားစုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မရွှေမိုး(ကိုးရီ
မိသားစုစကားဝိုင်း – Episode3–
ဒီတစ်ပတ် မိသားစုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုသွန်းန…
PVTV ရဲ့ မိသားစုစကားဝိုင်း အစီအစဉ်…
PVTV ၏ မိသားစုစကားဝိုင်း
Art of Revolution
Knowledge for Revolution
Open your Heart, Listen and Let’s go to Goal
Tech for Revolution
True News or Gynn
(၂၄-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
Public Voice Television
PVTV Theme Song – PVTV
နေ့စဉ်သတင်းကဏ္ဍ – ထက်ထက်အိန္ဒြာအောင်
ပြည်သူ့ခုခံစစ်သတင်းများ – ပြည့်နွေဦး
ပေးစာကဏ္ဍ – ခွန်အားမျှပေးစာ (အပိုင်း – ၁၀)
PDF တပ်သားများ၏ လေ့ကျင်ပြင်ဆင်နေမှုများ – PDF
ဆောင်းပါး – PDF ဟာ သန်း ၅၀ ရဲ့ နှလုံးသားဆိုတာ မင်းတို့သိလား / သခင် N
နေ့စဉ်ည (၈:၃၀) အချိန်တွင် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ရုပ်သံသတင်းများ၊ ရုပ်သံစာမူများ၊ သီချင်းများနှင့် အခြားဖန်တီးမှုအနုပညာလက်ရာများ၊ Video များကို [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Add your reaction
Public Voice is Public Power. PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.
(၁၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
PVTV ၏ ခွန်အားမျှပေးစာကဏ္ဍ
(၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
Like 900,723 Fans
Follow 25,048 Followers
Subscribe 89,500 Subscribers
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ ဂျာမနီ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဆွေးနွေးပဲနေလိုက် တော့ nug
ဦးဂျင်မီနှင့် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်တို့ကို စစ်ကောင်စီက သေဒဏ်အမိန့်ချ @DVB
San Jay Naidu
မြန်မာငွေ တစ်သိန်းကျပ် နီးနီးရမယ့် website လေးရှိတယ်ညေးတို့ရေ။ ငွေထည့်စရာမလိုဘူးနော်။လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ချည်းဘဲ။ #wall_ထဲဝင်ကြည့်ကြပါ_ဘဒိုတို့
Han Lin Thant
ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီTotal Energiesက မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ငန်းတွေ ရုပ်သိမ်းကြောင်း ထုတ်ပြန်
PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.
2021 © PUBLIC VOICE TELEVISION | All Rights Reserved .
Radio NUG – Oct 24th , 2021 Evening
Public Voice is Public Power.
SpringRevolution PVTV Myanmar Public Voice Television PVTV RadioNUG
ရုပ်သံသတင်းများ၊ ရုပ်သံစာမူများ၊ သီချင်းများနှင့် အခြားဖန်တီးမှုအနုပညာလက်ရာများ၊ Video များကို [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။